Thingyan and Accidents among Children - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Thingyan and Accidents among Children
သင်ျကွနျဆိုတဲ့အသံကွားရငျ မိမျောကြောခမျြးသညျ။ လှနျခဲ့တဲ့သုံးနှဈလောကျက သင်ျကွနျမှာ မိမျောသားအကွီးကောငျ ရပျကှကျထဲကလူတှနေဲ့သင်ျကွနျလိုကျလညျခငျြတယျဆိုလို့ ထညျ့လိုကျသညျ။အိမျနားက သူနဲ့ဆော့နကေကြလေးအဖျောတှရေော၊ လူကွီးတှလေညျးပါတော့ စိတျခလြကျခထြညျ့လိုကျတယျ။
အငယျနှဈကောငျကိုတော့ ငယျသေးလို့မထညျ့လိုကျ။ ညနစေောငျးလို့ပွနျလာတော့ နားတဈဖကျကိုအုပျလို့. မကျြရညျလညျရှဲနဲ့….အမလေးလေး…ကိုယျ့မှာ ခေါငျးနပနျးကိုကွီးသှားတာပဲ…ဘာမြားဖွဈလဲပေါ့….အကြိုးအကွောငျးမေးကွညျ့တော့ ရပေနျ့နဲ့အထိုးခံရတာ… ရပေနျ့ကရအေားကနညျးတာမှမဟုတျတာ…ကလေးနားက နုနုလေးရယျလေ…
အဲ့လိုနဲ့ သင်ျကွနျတှငျးကွီးဆေးရုံပွေးရ….သင်ျကွနျတှငျးဆိုတော့ သှားရေးလာရေးကမလှယျ….တခြို့အပွငျဆေးခနျးတှကေလညျး ပိတျနဲ့….ဒုက်ခတှရေောကျလိုကျတာမှ….
အဲ့လိုနဲ့နောကျတဈနှဈရောကျတော့ အပွငျထှကျမလညျခိုငျးရဲတော့ဘူး။လညျတဲ့သူတှကေလညျး မချေါရွဲကတော့ဘူး။
ညီအကိုသုံးယောကျလုံး ကိုယျ့ရပျကှကျထဲမှပဲဆော့စသေတညျး ပေါ့။အကွိုနေ့ အဆငျပွတေယျ၊အကနြေ့ ဘာမှမဖွဈသေး၊အကွတျနေ့ ဆော့ကောငျးတုနျး…အဲ..အတကျနေ့…ဘယျလောကျ မီးကုနျယမျးကုနျသောငျးကနျြးလိုကျကွတယျမသိ၊ အငယျကောငျကခြျောလဲပီး လကျကြိုး၊အလတျကောငျက စပရေးနဲ့မကျြနှာဖွနျးခံရပွီး မကျြလုံးတှေ နီရဲတကျလာ၊ယားတယျဆိုပွီး လကျတှနေဲ့ပှတျတော့ပိုဆိုး ပိုရဲ…အငယျကောငျကိုလညျးစိတျပူရ ၊အလတျကောငျကိုလညျး ကနျးမြားကနျးသှားရငျဆိုပွီးပူရ….ဆေးရုံပွေးရပွနျရော… ဆေးရုံရောကျတော့ တှပေ့ါ့…ကိုယျ့သားတှလေိုပဲ သင်ျကွနျမှာကစားရငျး လကျကြိုးလာတဲ့ကလေးတှရေော….အကွီးကောငျဖွဈသလို ရပေနျ့နဲ့အထိုးခံရလို့ လာပွတဲ့ကလေးတှရေော…မွငျရတှရေ့တာ မသကျသာစရာတှခေညျြး….
ဒါနဲ့ပဲ မနှဈကတော့ သင်ျကွနျအပွငျထှကျမဆော့ခိုငျးတော့ဘဲ အိမျထဲပဲနခေိုငျးလိုကျတော့တယျ။မုနျ့လေးဘာလေးလုပျစားကွတယျပေါ့ သားအမိသားအဖတှေ။ကလေးတှလေညျး ထှကျဆော့ဖို့မပူဆာရွဲကတော့ဘူး။မှတျသှားပွီလေ…
ဘေးအိမျက ကလေးတဈသိုကျကတော့ ခှကျစောငျးခုတျလိုကျတာ ခှကျပါလှငျ့ပါသှားပွီး ထိခိုကျမိလို့ အခငျြးခငျြးရနျဖွဈတာ ကွားလိုကျသေးတယျ။
သင်ျကွနျမပြျောရဘူးတော့မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယျတှငေယျငယျကလို အေးအေးခမျြးခမျြးပြျောပြျောရှငျရှငျကစား စခေငျြတယျ။
မိဘတှအေနနေဲ့လညျး ကလေးတှကေို အန်တရယျရှိတဲ့ ကစားစရာတှကေို တားမွဈထားမယျ၊ ကလေးတှရေကေစားနတေဲ့အခြိနျ အနီးအနားက စောငျ့ကွညျ့ပေးနိုငျမယျဆိုရငျပိုကောငျးပါတယျ။
မင်ျဂလာရှိတဲ့ နှဈသဈကူးအခါသမယမှာ တဈဦးနဲ့တဈဦး နာကငျြစမေယျ့၊အန်တရာယျဖွဈစမေယျ့ ကစားနညျးတှကေို ရှောငျနိုငျသမြှရှောငျရှားပွီး နှဈသဈကိုမင်ျဂလာရှိစှာကနျြးမာစှာကွိုဆိုနိုငျဖို့ ဆန်ဒပွုရငျး……
သင်္ကြန်ဆိုတဲ့အသံကြားရင် မိမော်ကျောချမ်းသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်က သင်္ကြန်မှာ မိမော်သားအကြီးကောင် ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေနဲ့သင်္ကြန်လိုက်လည်ချင်တယ်ဆိုလို့ ထည့်လိုက်သည်။အိမ်နားက သူနဲ့ဆော့နေကျကလေးအဖော်တွေရော၊ လူကြီးတွေလည်းပါတော့ စိတ်ချလက်ချထည့်လိုက်တယ်။
အငယ်နှစ်ကောင်ကိုတော့ ငယ်သေးလို့မထည့်လိုက်။ ညနေစောင်းလို့ပြန်လာတော့ နားတစ်ဖက်ကိုအုပ်လို့. မျက်ရည်လည်ရွှဲနဲ့….အမလေးလေး…ကိုယ့်မှာ ခေါင်းနပန်းကိုကြီးသွားတာပဲ…ဘာများဖြစ်လဲပေါ့….အကျိုးအကြောင်းမေးကြည့်တော့ ရေပန့်နဲ့အထိုးခံရတာ… ရေပန့်ကရေအားကနည်းတာမှမဟုတ်တာ…ကလေးနားက နုနုလေးရယ်လေ…
အဲ့လိုနဲ့ သင်္ကြန်တွင်းကြီးဆေးရုံပြေးရ….သင်္ကြန်တွင်းဆိုတော့ သွားရေးလာရေးကမလွယ်….တချို့အပြင်ဆေးခန်းတွေကလည်း ပိတ်နဲ့….ဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာမှ….
အဲ့လိုနဲ့နောက်တစ်နှစ်ရောက်တော့ အပြင်ထွက်မလည်ခိုင်းရဲတော့ဘူး။လည်တဲ့သူတွေကလည်း မခေါ်ရြဲကတော့ဘူး။
ညီအကိုသုံးယောက်လုံး ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲမှပဲဆော့စေသတည်း ပေါ့။အကြိုနေ့ အဆင်ပြေတယ်၊အကျနေ့ ဘာမှမဖြစ်သေး၊အကြတ်နေ့ ဆော့ကောင်းတုန်း…အဲ..အတက်နေ့…ဘယ်လောက် မီးကုန်ယမ်းကုန်သောင်းကျန်းလိုက်ကြတယ်မသိ၊ အငယ်ကောင်ကချော်လဲပီး လက်ကျိုး၊အလတ်ကောင်က စပရေးနဲ့မျက်နှာဖြန်းခံရပြီး မျက်လုံးတွေ နီရဲတက်လာ၊ယားတယ်ဆိုပြီး လက်တွေနဲ့ပွတ်တော့ပိုဆိုး ပိုရဲ…အငယ်ကောင်ကိုလည်းစိတ်ပူရ ၊အလတ်ကောင်ကိုလည်း ကန်းများကန်းသွားရင်ဆိုပြီးပူရ….ဆေးရုံပြေးရပြန်ရော… ဆေးရုံရောက်တော့ တွေ့ပါ့…ကိုယ့်သားတွေလိုပဲ သင်္ကြန်မှာကစားရင်း လက်ကျိုးလာတဲ့ကလေးတွေရော….အကြီးကောင်ဖြစ်သလို ရေပန့်နဲ့အထိုးခံရလို့ လာပြတဲ့ကလေးတွေရော…မြင်ရတွေ့ရတာ မသက်သာစရာတွေချည်း….
ဒါနဲ့ပဲ မနှစ်ကတော့ သင်္ကြန်အပြင်ထွက်မဆော့ခိုင်းတော့ဘဲ အိမ်ထဲပဲနေခိုင်းလိုက်တော့တယ်။မုန့်လေးဘာလေးလုပ်စားကြတယ်ပေါ့ သားအမိသားအဖတွေ။ကလေးတွေလည်း ထွက်ဆော့ဖို့မပူဆာရြဲကတော့ဘူး။မှတ်သွားပြီလေ…
ဘေးအိမ်က ကလေးတစ်သိုက်ကတော့ ခွက်စောင်းခုတ်လိုက်တာ ခွက်ပါလွင့်ပါသွားပြီး ထိခိုက်မိလို့ အချင်းချင်းရန်ဖြစ်တာ ကြားလိုက်သေးတယ်။
သင်္ကြန်မပျော်ရဘူးတော့မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ်တွေငယ်ငယ်ကလို အေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစား စေချင်တယ်။
မိဘတွေအနေနဲ့လည်း ကလေးတွေကို အန္တရယ်ရှိတဲ့ ကစားစရာတွေကို တားမြစ်ထားမယ်၊ ကလေးတွေရေကစားနေတဲ့အချိန် အနီးအနားက စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
မင်္ဂလာရှိတဲ့ နှစ်သစ်ကူးအခါသမယမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နာကျင်စေမယ့်၊အန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ့် ကစားနည်းတွေကို ရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပြီး နှစ်သစ်ကိုမင်္ဂလာရှိစွာကျန်းမာစွာကြိုဆိုနိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြုရင်း……
7 Factors for Choosing Contraceptive Methods